Kareemada la isku Caddeeyo:- Gabar Uu Aabbaheed Garan Waayay | Gaaroodi News
Kareemada la isku Caddeeyo:- Gabar Uu Aabbaheed Garan Waayay
July 2, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Grazia waxay kareemada la isku caddeeyo isticmaaleysay muddo 10 sano ah
Haweeney in ka badan toban sano isticmaali jirtay kareemada la isku caddeeyo ayaa sheegtay in midabkeedu uu aad isku beddelay ilaa aabbaheed uu ka garan waayo.
Grazia, oo ka soo jeedda magaalada Bradford, Waqooyiga Yorkshire, dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in markii ay jirtay 18 sano ay bilowday inay si joogto ah u isticmaasho kareen ay ku jirto maaddada steroid, kaas oo ay joojisay sanadkii la soo dhaafay.
“Markii uu i arkay, wuu yaabay sababtoo ah waan caddaaday,” ayay tiri.
Baaritaan ay BBC-du sameysa ayaa lagu ogaaday in dukaamada qaar lagu iibiyo daawooyinka loogu talo galay in dhakhtar keliya uu dadka u qoro.
Kareemada waxaa ku jirta maaddada awoodda badan ee steroid – clobetasol propionate – oo caadi ahaan muddo gaaban lagu daweeyo xanuunnada maqaarka. Waaxda caafimaadka Ingiriiska ee NHS ayaa ku talineysa in dadku ay dawadaas isticmaali karaan ugu badnaan hal toddobaad.
Dhibaatada ka dhalata kareemka ayaa ah inuu caddeynayo maqaarka, sidaas darteed dadka qaar ayaa isticmaala iyaga oo u heysta inay yihiin waxyaabaha la isku qurxiyo.
Dhakhaatiirta xanuunnada maqaarka ayaa ka digay in muddo dheer oo la isticmaalo kareemadaas ay ka dhalan karaan dhibaatooyin maqaarka ah.
‘Qofkaasi ma adigaa?’
Grazia, oo haatan 29 jir ah, ayaa siddeed sano kahor ka soo guurtay Talyaaniga iyada oo degtay magaalada Bradford, waxayna halkeedasii ka sii wadday isticmaalka waxyaabaha ay ku jiraan maaddada clobetasol.
Maaddaama ay dibadda ku nooshahay, muddo dheer kaddib ayay is arki jireen aabbaheed.
“Aabbahay ayaa mar ii sheegay inuusan i aqoonsan sababtoo ah isma aynaan arag muddo labo sano ah,” ayay tiri Grazia.
“Wuu niyad jabsanaa, wuuna murugeysnaa wuxuuna iga baryay inaan joojiyo [isticmaalka kareemada].”
Waxay sheegtay in markii ay 18 jir ku bilaabeysay isticmaalka kareemada ay lahayd “midab gebi ahaanba ka duwan kan hadda”.
“Waxaan u heystay inaan fool xumahay,” ayay sii raacisay.
“Way i murjineysaa sababtoo ah muddo dheer ayaan isticmaalayay. Waxaan filayaa inay waqti qaadaneyso inaad jeclaato naftaada.”
Dr Walayat Hussain, oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada maqaarka, ayaa oggolaaday inuu baaro Grazia si loo ogaado saameynta ay isticmaalka kareemadaas ee muddada dheer ku yeesheen.
Markii uu arkay sawirradeeda makrii ay jirtay 18 iyo midabkeedii dabiiciga ahaa, Dr Hussain ayaa dib u istaagay wuxuuna weydiiyay: “Kaasi ma sawirkaagaa?”
Weriyeyaal is qarinayay ayaa waxaa u suuragashay inay kareemadaas ka iibsadaan lix ka mid ah toddobo dukaamada lagu iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo oo ay ku booqdeen magaalada Yorkshire. Kan toddobaad, ayaa u sheegay in kareemadaasi ay haatan ka go’an yihiin dukaanka.
Dr Hussain ayaa sheegay “in wax aad looga walaaco ay tahay” in kareemada laga heli karo meel walba.
“Kuwani waa dawooyin uu dhakhtar keliya qoro,” ayuu yiri.
“Waa in aadan iska tegin dukaamada oo aadan ka soo iibsan, maaddaama ay dhibataooyin khatar ah ku yeelan karaan bukaannada.”
Grazia ka hor iyo kadib isticmaalkeeda kareenka
Kareemada la isku caddeeyo “waa kuwa ay ku jirto xaddiga ugu badan ee maadada steroid”, ayuu yiri, marka loo eego kuwa dukaamada laga heli karo ee aan awoodda badan lahayn ee loogu talo galay in lagu daweeyo xanuunnada maqaarka ayna ku jirto maaddada hydrocortisone.
“Marka qiyaas isticmaalka dawadan adiga oo aan ogeyn waxa aad maqaarkaaga ku sameyneyso. Runtii waa arrin walaac leh,” ayuu yiri.
“Qofka isticmaala ma ogaan karo waxa ay tahay clobetasol propionate. Waxay u heystaan inay tahay waxyaabaha la isku qurxiyo, iyaga oo aan ka war heyn inay iibsanayaan maaddada steroid oo aad u awood badan isla markaana sababi karta dhibaatooyin muddo dheer saameyn kugu yeesha.”
Heather Nelson, oo ka tirsan ururka Caafimaadka Dadka Madow ee xaruntiisu tahay Leeds, loogan agol leeyahay in dadku ay helaan adeeg caafimaad iyo daryeel bulsho oo tayo leh, ayaa sheegtay in xaddiga isticmaalka kareemada la isku caddeeyo uu yahay mid “aad u sarreeya”.
Waxay intaas ku dartay: “Ma xisaabi karno sababtoo ah dadku si fudud uma qirtaan inay isticmaalaan kareemada la isku caddeeyo. Maxay u isticmaalaan?
“Sababtoo ah waxay isku dayayaan inay helaan midabka dadka Yurub u dhashay oo kale. Haddii ay doonayaan inay heer ka gaaraan xirfadaha qaar waxay rumeysan yihiin inay ku qasban yihiin inay u muuqdaan qaab gaar ah.”
Binti Asumani waxay bilowday isticmaalka kareemada la isku caddeeyo labo sano kadib markii ay tagtay UK
Binti Asumani waxay iyada, seygeeda iyo wiilkooda tageen dalka UK sanadkii 2013 iyagoo ka soo guuray Tanzania. Labo sano kaddib, waxay bilowdya isticmaalka kareemada la isku caddeeyo.
Waxay tiri: “Waxaan doonayay inaan beddelo midabkeyga sababtoo ah waxana arkay gabdhaha saaxiibbadey ah inay cad yihiin waxaan eegay nafteyda waxaan is iri: ‘Maxaadan u qurxuxsaneyn?'”
Binti ayaa raadisay in kareemadaas la iibiyo, saaxiibbadeed ayaana u tilmaamay suuqa, halkaas oo ay ka soo iibsatay kareemo la isku caddeeyo oo awood badan.
Kaddib markii ay isticmaashay muddo labo sano ah, waxay isku aragtay calaamado aysna jecleysan.
“Wejiga waxaa iiga soo baxay finan indhahayguna mar waliba way ilmeyn jireen, wayna i cun-cuni jireen marka aan furo caagga kareenka,” ayay tiri.
Kaddib markii ay u tagtay dhakhtarada oo ay tustay kareenka, Binti waxaa loo sheegay inay si degdeg ah u joojiso isticmaalkiisa. Waxay sheegtay in aysan arrintaasi u fududeyn oo ayna saameyn ku yeelatay nafteeda.
“Si aad u caddaato, aadna u qurux badnaato, waqti ayay qaadaneysaa balse inaad joojiso waqti ma qaadaneyso. Waxaan muddo labo bilood laga joogo ku laabtay midabkeygii dabiiciga ahaa,” ayay tiri.
“Waan ka xumaaday, guriga ayaan ku jiray muddo labo bilood ah, sababtoo ah sidii hore ayaan ka madoobaaday.”
Haatan waxay isku qasataa kareenka la isku caddeeyo ee ay ku jirto maaddada steroid iyo mid kale oo ay dukaan ka soo iibsatay si aysan ugu laaban midabkeedii hore.
Waxay sheegtay inay jeclaan lahayd in arrimuhu ay is beddelaan inta aysan gabadheedu ku fekerin inay sidaas oo kale sameyso.
“Maxay tahay micnaha ku jira inaad isku dhaawacdo qurux darteed?”ayay tiri. “Waxaan rajeynayaa in gabadheyda ay fahmi doonto inay dhibaatooyin iga soo gaareen isticmaalka kiimikadan.”
Si xun u isticmaalidda maaddada steriods-ka iyo dhibaatooyinka ka dhasha
•Maqaarka ayay qortaa – maqaarka ayaa u ekaanaya sida warqad oo kale
•Dhibataooyin aragga indhaha ah – khatar sare oo uu qofka u geli karo inuu ragga beelo
•Maqaarku wuxuu u nuglaanayaa dhaawac
•Canbaar ayuu maqaarku yeesho
•Dildillaac ku dhaca maqaarka
Ururka Dhakhaatiirta Maqaarka ee Britain ayaa ku baaqay in wax laga qabto arrintan, waxayna yiraahdeen “hay’adaha heer qaran iyo heer gudaha ahba waxay u baahan yihiin inay bartilmaameedsadaan kareemada sida sharci darrada ah loogu iibiyo dukaamada iyo baraha internet-kaba”.
Madaxa machadka CTSI John Herriman ayaa yiri: “Waaxaha ilaalinta tayada ee gudaha dalka waxay sanadihii la soo dhaafay baaritaanno ku sameeyeen dukaamada iibiya waxyaabaha khatarta leh ee la isku caddeeyo waxayna dul dhigeen ganaax culus ama xitaa xitaa xabsi.
“Si kastaba, weli waxaa harsan in waxyaabo badan laga qabto. Bulshadu waa inay arrimahaas u gudbiyaan dowladda si ay hay’aduhu u fahmaan xaddiga dhibaatada ayna tallaabo uga qaadaan